Sawirro: Garoon Diyaaradeed Midkii Ugu Weynaa Caalamka Oo laga Furay Magaalada Istanbul Ee Wadanka Turkiga.
Monday October 29, 2018 - 12:53:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib Munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ayaa xarigga looga jaray garoonka diyaaradeed ee ugu weyn caalamka.
Rajeb Dayib Erdogaan ayaa xarigga ka jaray garoonka cusub oo xafladdiisa ay soo xaadireen tobaneeyo madaxweynayaal iyo hoggaamiyaal ah oo ka socday dowlado dhaca qaaradaha Yurub,Asia iyo Afrika.
Garoonkan oo ladhagax dhigay sanaddii 2014 ayaa kuyaal xaafadaha qadiimiga magaalada Istanbul qeybta xigta qaaradda Yurub, garoonkan ayay dowladda Turkiga ku sheegtay in uu yahay midka ugu weyn caalamka islamarkaana uu markiiba qaabilo karo boqolaal diyaaradood.
Injineerkii lahaa fikradda nashqadeynta garoonka Istanbul ayaa sheegay in uu ku fadhiyo masaaxo dhan 76.5 Milyuun Mitir isku weer ah, waxaana laqorsheynayaa in laga guuri doono madaarka Ataatorki oo ah midka ugu weyn ee wadanka Turkiga.
Waxaa lasaadaalinayaa in dad kabadan 200 oo Milyan ay sanad walba ka safraan garoonka cusub sida lagu sheegay xayaysiis lagasii daayay warbaahinta TRT ee ku hadasha afka dowladda Turkiga, amiirka dowladda Qadar Tamiim Bin Xamad oo xafladdii furitaanka garoonka ka hadlayay ayaa ballan qaaday in dowladdiisu gacan weyn ka geysan doonto maalgashiga dhaqaale ee Turkiga.
Xukuumadda Turkiga oo loollan dhanka dhaqaalaha ah kula jirta Mareykanka iyo dowladaha qaaradda Yurub ayaa ku dhawaaqday in ay dardar gelinayso kaabayaasheeda dhanka dhaqaalaha ah si ay usoo jiidato dowladaha ku bahoobay Ururka Midowga Yurub oo muddo sanada ah ay dadaal ugu jirtay sidii ay ugu biiri laheyd.
Xiisada ka dhax aloosmay Iiraan iyo Reergalbeedka Kadib markii uu si dirqi ah ku fakaday Markab laga leeyahay Britain.